अस्पतालहरुमा बेडको अभाव हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले १०० शय्याको कोभिड अस्पताल बनाउने भयो। - Rautahat News
‘अस्पतालहरुमा बेडको अभाव हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले १०० शय्याको कोभिड अस्पताल बनाउने भयो।’
रौतहट न्यूज़// प्रदेश २ मा कोरोना संक्रमितका लागि अस्पतालहरुमा बेडको अभाव हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले १०० शय्याको कोभिड अस्पताल बनाउने तयारी सुरु गरेको छ। प्रदेश सरकारले जनकपुरधाम उपमहागरपालिका वडा नम्बर १४ मा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको मणिपाल शिक्षण अस्पतालको भवनलाई कोभिड अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने तयारी थालेको हो।
हुन त प्रदेश सरकारले कोरोनाको पहिलो लहर आउँदासमेत मणिपाल शिक्षण अस्पतालको सो भवनलाई आइसोलेसनको रुपमा प्रयोग गर्ने बताएको थियो। यद्यपि त्यो भवनलाई आइसोलेसनको रुपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारको घोषणा, घोषणामै सिमित रह्यो।
फेरि कोरोना संक्रमणको लहर प्रदेश २ मा तीव्र गतिमा फैलिन थालेपछि प्रदेश सरकारले २० दिनभित्रै प्रयोगमा ल्याउने गरी मणिपाल शिक्षण अस्पतालको सो जीर्ण भवनलाई कोरोना अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने दाबी गरिरहेको छ।
गत वर्ष मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको केही महिना नबित्दै कोरोनाको लहर कम हुँदै जान लागेपछि त्यसको नाउँमा बजेट त खर्च भयो तर काम भने अगाडि बढ्न सकेन। एक वर्षमा पनि बन्न नसकेको मणिपाल शिक्षण अस्पतालको जीर्ण भवनलाई कोभिड अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने तयारी फेरि थालिएको छ।
यसका लागि प्रदेश सरकारको एक टोलीले मणिपालको सो भवनको बुधबार निरीक्षणसमेत गरेको छ। त्यहाँ २० आईसीयू बेडसहित १०० शय्याको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइने मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका संयोजक एवं सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियर भगवान झाले जानकारी दिए। उनका अनुसार त्यहाँ निरीक्षण गरेर मुचुल्का उठाउनुका साथै अनलाइन टेण्डरको प्रकृयासमेत पुरा भइसकेको छ।
निरीक्षणको क्रममा भवनको १२ वटा कोठा ताल्चा लागेको, २२ वटा कोठामा झ्याल ढोका नरहेको, भएका ढोकाहरु पनि जीर्ण अवस्थामा रहेको, २ वटा कोठाको छत चुहिएको, रंगरोगन नभएको पाइएको ईन्जिनियर झाले बताए।
इञ्जिनीयर झाले अस्पताल सञ्चालनका लागि जनशक्ति भर्नाको प्रकृयासमेत अगाडि बढाइसकिएको जानकारी दिए।
भवनमा खानेपानी, वाथरुम फिटिङ, प्लम्बिङ, वायरिङ, प्लास्टरलगायतका कार्य गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको उनले बताए।
किन बन्न सकेन मणिपाल शिक्षण अस्पताल ?
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मुजेलियाभन्दा पश्चिममा १७ वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको चिकित्सा शिक्षा शिक्षण अस्पतालको भवन विभिन्न विवादका कारण निर्माण हुन नपाउँदै त्यतिकै थन्किएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा ख्याती कमाउन सफल भारतको मणिपाल समूहले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१३ धत्ताटोलमा शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्न गुठी संस्थान जनकपुरसँग लिजमा जग्गा लिएको थियो। तर, मणिपाल समूहले निर्माण कार्य बीचमै छोडेपछि निर्माण गरिएका संरचनासमेत ध्वस्त हुन थालेका छन्।
मणिपाल समूहले २०५१ साउन ७ गते गुठी संस्थान जनकपुरसँग सम्झौता गरेर ४९ वर्षका लागि अस्पताल निर्माण गर्न १७ बिघा जग्गा लिजमा लिएको थियो। गुठी संस्थानलाई पहिलो वर्ष ७ लाख र त्यसपछि हरेक वर्ष १० प्रतिशत रकम थपेर मणिपाल समूहले तिर्नुपर्ने सम्झौता छ।
मणिपाल समूहले जग्गा लिजमा लिई निर्माण कार्य थाले पनि पुरा किन गर्न नसकेको भन्ने स्पष्ट कारण केही भनेको छैन। तर कतिपयले माओवादी द्वन्द्वको बेला चन्दा समस्या र तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री डा. रामवरण यादवको अनिच्छाका कारण बन्न नसकेको तर्क गर्छन्।
२५० शय्याको शिक्षण अस्पतालको शिलन्यास तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री तथा पूर्व राष्ट्रपति डा. यादवले नै गरेका थिए। मणिपाल समूहले निर्माण कार्यअघि नबढाउँदा गुठी संस्थानले जग्गासम्बन्धी सम्झौता रद्ध गर्ने तयारीसमेत गरेको थियो। गुठी संस्थानले २०७१ वैशाख १९ मा सम्झौता रद्ध गर्न पत्र पठाए पनि कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। सम्झौताअनुसार उद्देश्य अनुरुप काम नगरे र समयमा भाडा नबुझाएको खण्डमा सम्झौता रद्ध गर्ने प्रावधान छ। तर मणिपाल समूहले सम्झौताअनुसार जग्गा भाडा अझै बुझाउँदै आएको गुठी संस्थान जनकपुरका प्रमुख बैकुण्ठ रेग्मीले जानकारी दिए।
निर्माण कार्य पुरा नभएर सञ्चालनमा आउन नसक्दा करोडौँको संरचना प्रयोगविहीन भएको छ। नगर क्षेत्रभन्दा टाढा अस्पतालका लागि निर्माण गरिएको संरचना अहिले खण्डहर बन्न पुगेको छ। टायल्स, मार्बल प्रयोग गरी निर्माण गरिएको भवन प्रयोगविहीन भएपछि झ्याल, ढोका कुहिन थालेका छन्।
निर्माण गरिएका संरचना रेखदेख गर्न मणिपाल समूहले चारजना सुरक्षा गार्ड राखेको समाचार नेपाल समयबाट लिएको छ।